Iiholide embindini wesiqithi esinelanga eAkterblick - I-Airbnb
Iiholide embindini wesiqithi esinelanga eAkterblick
Iholide embindini wesiqithi esinelanga sase-Usedom! Kwiflethi okanye indlu ekwicomplex uAkterblick kwindlu iDreschkammer eseMellenthin uza kuchitha iholide epholileyo. Le flethi inekhitshi elinento yonke nendawo yokuhlala/yokutyela etofotofo. Ineendawo zokulala ezifikelela kubantu abayi-7 namagumbi okuhlambela ayi-2. Igadi engaphandle komnyango ikumema ukuba ugcakamele ilanga, uphole uze wonwabele ingokuhlwa etofotofo.
Kule ndawo ungahamba ngeenyawo, ujikeleze uze uqubhe (I-Akterwasser: malunga neekhilomitha eziyi-3, ulwandle lwaseBaltic Sea: malunga neekhilomitha eziyi-7).
Iflethi okanye indlu ekwicomplex uAkterblick (malunga ne-70 sqm) ikumgangatho ophantsi, ukufikelela kumgangatho ophantsi. Kwiflethi uza kufumana ikhitshi elingenazithintelo elinesitovu, ioveni, ifriji/i-freezer, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokwenza ikofu, i-toaster neketile. Ikhitshi livulekile kwindawo yokuhlala/yokutyela. Isofa ekwindawo yokuphumla/yokutyela ingasetyenziswa njengesofa yokulala yabantu abayi-2. Igumbi lokuhlambela lineshawa nethobhi ibe alinazithintelo. Iflethi inamagumbi okulala aneebhedi eziyi-3 (ibhedi eyi-1 ingasongwa kwikhabhathi) kunye negumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini. Eli gumbi lokulala lingafakwa kwindawo yokungena eyahlukileyo kwaye linegumbi lokuhlambela eline-shower/indlu yangasese. Apha uza kufumana nomatshini wokuhlamba impahla.
Kwiflethi kukho izitya eziyi-2 zokuhamba zabantwana, nceda usazise ukuba ufuna ikhothi.
Igadi engaphandle komnyango ikunika indawo yokugcakamela ilanga, i-romping, i-barbecuing kwaye ikumema ukuba wonwabele ingokuhlwa etofotofo. Ifenitshala yasegadini, izixhobo ezahlukeneyo zokudlala kunye neshawa yasegadini ziyafumaneka.
Kwelinye icala lomgangatho osezantsi kukho igumbi lokulala elilala abantu ababini, phezulu kwiiflethi okanye izindlu ezikwicomplex ezimbini. Ukufikelela kula magumbi kuhamba ngendlela eyahlukileyo ukusuka ngaphambili.
Le ndlu iphakathi kwezinye iindawo zokuhlala neeholide kunye namadlelo kwindawo ethe cwaka kwidolophana yaseMellenthin.
Indawo esembindini weMellenthin (enecawa ukususela ngenkulungwane ye-14 kunye nenqaba yaseMellenthin - embindini wesiqithi saseSuseom) ikumgama wemizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 xa uhamba ngeenyawo. Le ndawo ilungele ukuhamba ngebhayisekile (i-Feininger-Tour, i-Usedomer Cycle path) kunye nokunyuka intaba.
Ungaqubha kwiAkterwasser eBalm okanye eNeppermin, ekumgama oziikhilomitha eziyi-3, nakwiBaltic Sea eÜckeritz, ekumgama oziikhilomitha eziyi-7.
Iibhafu zaseAhlbeck, iHeringsdorf kunye neBansin zimalunga nemizuzu eyi-20 ngemoto, njengoko kukho iibhafu ze-amber ze-Ückeritz, iZempin, iKoserow kunye neLoddin.
Sifumaneka kuwe nanini na ngomyalezo okanye ngefowuni njengomntu esinokuqhagamshelana naye.